Tratry Ny Taona Ny GV! Manomboka Ny Fiandohana Vaovao Indray Isika Eto! Andao Hanatanteraka Izany Isika! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2018 7:10 GMT
Ahitana hevitra samihafa izay tsy voatery hilahatra araka ny tokony ho izy ity lahatsoratra ity koa hialako tsiny mialoha noho izany.
Henjana iny taona 2017 iny. Fotoan-tsarotra ho ahy, taona sarotra ho an'ny faritra misy ahy, taona sarotra ho an'ny vondrom-piarahamonintsika, taona sarotra ho an'ny vondrom-piarahamonina maro izay ifandraisako. Miombon-kevitra tamin'izay voalazan'i Carolina vao haingana aho hoe : “Tafavoaka velona tamin'ny taona 2017 isika!”
Na dia maro amintsika aza no tafavoaka velona dia misy ​​kosa ny sasany miresaka momba ny fanantenana. Tsy ilay karazana fanantenana amin'ny tantaram-pitiavana nofinofy akory fa ilay tena zava-misy. Ilay tena ilaina. Raha tokony hosoratantsika ao anatin'ny tononkalo ny fanantenana dia ampiasaintsika ny fanantenana ho fitaovana iray amin'ny antom-pisiantsika, hanohanana ny adintsika. Miady mafy isika, tena mafy. Miaritra zavatra mahasosotra maro izay mitranga, amintsika, amin'ny namana, amin'ny olona tsy manan-tsiny izay fantatsika, na tsia .
Misy vidiny izany amin'ny hasambarantsika, amin'ny fahasalamantsika, na ara-batana na ara-tsaina. Miezaka mikarakara ny havantiantsika isika, ny namantsika, ny mpiara-miasa amintsika. Miezaka miaro ny vondrom-piarahamonintsika isika. Miezaka mamorona toerana azo antoka isika rehefa miezaka manaisotra ny mpanakorontana sy ny mpandrahona (mpampijaly ny kely). Kanefa lazaina mivantana izany rehefa tafahoatra. Ary mila fanampiana sy fampiononana na dia ny mahery indrindra amintsika aza. Na dia ireo matanjaka indrindra amintsika aza dia mahatsapa ho ketraka.
Tsapako fa miha manan-danja hatrany ny GV raha jerena ny fanakorontanana mahazo ity izao tontolo izao ity amin'izao fotoana izao, sy ny fomba fiovan'ny aterineto amin'ny endrika samihafa hatramin'ny niandohan'ny GV. Tamin'ny taompolo 2000, niadianay hevitra foana ny mikasika ny hoe moa ve mameno sa manolo ny fampahalalam-baovao mahazatra ny web2.0. Nisy ny fanehoan-kevitra maro teo amin'ireo bilaogera sy ny mpanao gazety mahazatra, izay nitarika ny fanerena ny fampahalalam-baovao mahazatra mba hivoatra. Lasa araka izay nirian'ny GV tany ampiandohana ny fampitam-baovao mahazatra ankehitriny .
Eo amin'io toerana io amin'izao fotoana izao ny fampitam-baovao mahazatra ary mbola mila fivoarana hatrany mankany amin'ny toerana izay hotarihin'ny GV indray. Vaovao faikany? Mangarahara? Vondrom-piarahamonina? Tambajotra? Iraisam-pirenena? Fanatontosana? Niasa momba izany rehetra izany isika nandritra ny taona maro talohan'ny nanombohan'ny fampitam-baovao mahazatra nahafantatra ny zava-dehibe sy nankalaza ara-barotra ireo teny momba ny “zava-mahafinaritra” na ny “zava-baovao”. Fotoana izao hahatsapana, fotoana izao hanehoana amin'izao tontolo izao fa ankizy mahafinaritra isika. Isika no mpitarika, ary ho mpitarika mandrakariva isika !
GV tao Colombo, 2017, sary avy amin'i Faaris Adam
Tena nahafinaritra ny nihaona taminareo tao amin'ny vovonana. Ireo namana efa ela, ary koa ireo vaovao! Tena niavaka ho ahy ny nanatrika ny vovonana ny faramparan'ny taona satria nanamarika ny fiandohana vaovao amin'ny fifandraisako amin'ny GV, ary nahatsapako ny fisiako ao anatin'ity vondrom-piarahamonina mahatalanjona ity izany. Efa ho sivy taona aho izao no tato amin'ny GV , izany no fotoana lava indrindra nijanonako tao amin'ny toerana iray!
Tamin'ny fahazazako, niova sekoly matetika aho isaky ny roa taona, satria nifindrafindra toerana ny fianakaviako, ary tany amin'ireo tanàndehibe samihafa aho no nianatra tamin'ny lisea sy ny oniversite. Tsy nahazatra ahy ny nijanona tao amin'ny toerana iray mandritra ny 4 na 5 taona. Tamin'izany fotoana izany, rehefa nandeha ny taona maro dia niezaka tsy dia nifandray loatra tamin'ireo toerana sy ny olona aho mba tsy ho mafy loatra ny fisarahana sy ny fifindrako toerana .
Saingy nahatsapa izany fifandraisana matanjaka izany sy ny fisiako aho miaraka amin'ity vondrom-piarahamonina ity. Ato anatin'ity vondrom-piarahamonina ity no nahitako ny fomba nahafahako niova mba hisokatra bebe kokoa amin'ny hafa, ireo hafa izay mitovy amiko kanefa samihafa. Manokatra ny saintsika tahaka ahy amin'ny mangarahara. Tato amin'ity vondrom-piarahamonina ity no nizarako ny fotoam-pandresena sy hafaliana ary niahiako ny fahasalamana ara-tsaina tao anatin'ny fotoanan’ alahelo sy ny faharesena. Ny fahasamihafana, ny fisakaizana, ny traikefa, ny famoronana, ny fahalalana, ny fahalianana, ny hatsaram-panahy, ohatra vitsivitsy ihany ireo amin'ny zavatra tiako ato amin'ity vondrom-piarahamonina ity.
Noho izany, manararaotra izao fotoana izao aho mba hisaorako anareo.
Lingua tao Colombo, 2017, sary avy amin'i Jer Clarke
Misaotra anao Global Voices, noho ny namelanao ahy hijanona ato mandritra ny sivy taona ho anao, ary mbola mijoro hatrany ho an'ny taona maro mbola hoavy!
Misaotra anareo ry Lingua satria zava-dehibe ho an'ny GV ianareo! Mampifandray ireo vondrom-piarahamonina samihafa, mampihaona ny fiteny samihafa, ary ireo faritra! Tsy “mpandika teny fotsiny” ihany ireo mpandika teny fa tena ilaina izy ireo! Ireo mpandika teny no milay indrindra! Ary ireo toniandahatsoratra Lingua no vedety! Ireo mpandika tenintsika, ianareo, dia manana ity traikefa manokana ity amin'ny fanovozana talenta maro sy amin'ny fandraisana anjara amin'ny tetikasa isankarazany, izay tsy voatery hifandray amin'ny fandikanteny! Ankoatra izany, manangana fifandraisana eo amin'ny vondrom-piarahamonintsika ny fandikan-teny, izay anisan'ny fototra manan-danja amin'ny fomba hivoaran'ny GV! Misaotra anareo! Mahery ianareo!
Misaotra ny mpanoratra GV! Ny fanoratana momba ny bilaogiko tato amin'ny GV no nanosika ahy handray anjara! Tohizo ny fanoratana, tohizo ny fahazotoana, tohizo hatrany araka izay efa nataonareo!
Misaotra ny Toniandahatsoratra GV! Tsy ampy ny fisaorako anareo fotsiny! Ianareo no mpitarika izay mamela ireo mpanoratra sy mpandika teny mahafinaritra hahavita ny tsara indrindra izay ataon'izy ireo!
Farany, mirary taona vaovao mahafinaritra ho anareo, Global Voices aho! Andeha hasehontsika izao tontolo izao ny fanantenana azo tanterahana! Andao isika hanova izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fanehoana ny tsara, fa tsy amin'ny ady amin'ny ratsy! Andao isika hampiray izao tontolo izao ao ambadiky ny hafaliana! Andao isika hiaraka ! Andao isika hanatanteraka izany!